Xigashooyinka Benjamin Graham: xigashooyinkiisa ugu fiican, taariikh nololeedkiisa iyo maalgelintiisa qiimaha | Dhaqaalaha
Maalgashadayaasha badan ee dunida soo maray, kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah Benjamin Graham, oo geeriyooday 1976. Sidoo kale loo yaqaan aabaha qiimaha maalgashiga, Maalgashadahan Ingiriisiga ah wuxuu macalin u ahaa dad waaweyn sida Warren Buffett ama Irving Kahn. Shaki la'aan, xigashooyinka Benjamin Graham waa kuwo mudan in la akhriyo, maadaama ay ku jiraan xikmad badan oo xagga maaliyadda ah.
Marka laga reebo weedhaha Benjamin Graham, waxaan sidoo kale ka hadli doonnaa cidda uu ahaa iyo qiimaha maalgashiga uu yahay. Waxaas oo dhami waxay ka mid yihiin dhaqanka guud ee adduunka maaliyadeed, sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad sii wadato akhriska.
1 15ka weedhood ee ugu fiican Benjamin Graham
2 Waa kuma Benjamin Graham?
3 Maalgashiga qiimaha
15ka weedhood ee ugu fiican Benjamin Graham
Sidaan horay u sheegnay, Benjamin Graham wuxuu ahaa maal-galiye caan ah oo loo yaqaan aabaha qiimaha maalgashiga. Sababtaas awgeed, waxaa habboon in la akhriyo weedhihii waaweynaa ee uu ka tagay Benjamin Graham. Marka xigta waxaan arki doonaa liiska shan iyo tobanka ugu fiican:
"Dadka aan xakamayn karin shucuurtooda uma haboona inay faa'iido ka helaan maalgashiga."
"Qof kasta oo maalgashi ku sameeya kaydka waa inuusan ka walwalin isbeddelada qaldan ee qiimaha amniga, maxaa yeelay muddada dhow suuqa saamiyada wuxuu u dhaqmaa sida mashiinka codbixinta, laakiin mustaqbalka fog wuxuu u dhaqmayaa sidii miisaan."
Kuma saxnaan doontid ama khaldami doontid maxaa yeelay dadkii badnaa ayaa kugu raacsan adiga. Waad saxnaan doontaa maxaa yeelay xogtaada iyo sababayntaada ayaa sax ah. "
"Mister Market waa shey-sheffiinka muddada gaaban laakiin wuxuu dib u soo ceshaa caqligiisa mustaqbalka fog."
Suuqa wuxuu u eg yahay pendulum had iyo jeer dhex wareega rajo wanaagsan oo aan la sii wadi karin (taas oo ka dhigaysa hantida qaali) iyo rajo xumo aan loo baahnayn (taas oo ka dhigaysa hantida mid aad u jaban). Maal-gashadaha caqliga badan waa qof macquul ah, oo iibiya yididiilo isla markaana iibsada kuwa rajo xumada qaba. "
"Haddii aad rabto inaad taajir noqoto, baro oo keliya sida loo kasbado, laakiin sidoo kale baro sida loo maalgashado."
"Khasaaraha ugu badan ee maalgashadayaashu wuxuu inta badan ka yimaadaa iibsashada hanti tayadeedu hooseyso waqtiyada dhaqaale ee wanaagsan."
"Waa wax la yaab leh inta badan ee ganacsatada kartida badan leh ee isku dayaya inay ka shaqeeyaan Wall Street, iyagoo iska indhatiraya dhammaan mabaadi'da caqliga saliimka ah ee ay ugu guuleysteen shirkadooda."
"Waqtiyada intiisa badan saamiyada waxay ku xiran yihiin isbeddelo aan caqli gal ahayn iyo is bedbedelka xad dhaafka ah ee sicirka taas oo ka dhalanaysa u janjeerida dadka badankood oo ku xididaystay mala awaal ama khamaarista ... si aad taas uga dhigto waxaad u baahan tahay rajo, cabsi iyo hunguri."
Helitaanka natiijooyin maalgashi oo lagu qanco ayaa ka fudud sida dadka badankoodu u maleeyaan; ku guuleysiga natiijooyin ka sarreeya waa ka dhib badan tahay sida loo dhawaaqo. "
"Xitaa maal-galiyaha caqliga badan ayaa laga yaabaa inuu u baahdo awood badan oo uusan raacin dadka badan."
Ka taxaddar saadaasha, waa wax aan caqli gal ahayn in laga fikiro in dadweynaha guud ay lacag ka samayn karaan saadaasha suuqa. "
"Dhibaatada ugu weyn ee maal-gashadaha, iyo xitaa cadowgiisa ugu xun, waxay u badan tahay inuu isagu yahay."
"Khasaaraha runtii foosha xun marwalba wuxuu yimaadaa kadib markuu iibsaduhu iloobo inuu waydiiyo qiimaha ay ku kacday."
"Waxaa jira laba sharci oo maalgashiga ah: Kan hore ma lumin, kan labaadna, ha iloobin xeerka koowaad."
Waa kuma Benjamin Graham?
Bishii Meey 9keedii, 1894, Benjamin Graham wuxuu ku dhashay London, oo maanta loo yaqaan aabaha qiimaha maalgashiga oo dhintey Sebtember 21, 1976. Ka sokow inuu yahay maalgaliye, Graham wuxuu kaloo ka shaqeeyey borofisar "Dugsiga Ganacsiga ee Columbia" "oo wuxuu qoray laba buug oo maaliyadeed:" Falanqaynta Amniga "iyo" Maalgashiga Sirdoonka. " Labadaba dad badan ayaa tixgeliya inay yihiin buugaagta maaliyadeed ee ugu wanaagsan abid.
Dugsiga Ganacsiga ee Columbia, Benjamin Graham wuxuu bilaabay inuu baro istiraatiijiyad maalgashi oo cusub oo loo yaqaan "qiimaha maalgashiga." Ilaa maantadan la joogo weli waa mid ka mid ah xeeladaha ugu isticmaalka badan ee lagula taliyay dhaqaale yahano waaweyn. Xerta aabaha aabaha maal gashiga waxaa ka mid ah dadka caanka ku ah Warren Buffett, Irving Kahn, Walter J. Schloss ama Jean Marie Eveillard.
In kasta oo waxbaristiisa ku saabsan maal-gashiga qiimaha ay bilaabatay 1928, ma ahayn illaa iyo intii la daabacay buugiisa "Falanqaynta Amniga" ee uu ku qeexay ereyga "maal-gashiga qiimaha." Buuggan waxaa la qoray David Dodd, oo ah maal-galiye Mareykan ah. Buugga "Maalgashadaha Sirdoonka", Graham wuxuu horey uga faallooday muhiimada ay leedahay farqiga udhaxeeya badbaadada ee maalgashiga qiimaha bixiya.
Ka sokow in loo yaqaan aabbaha qiimaha maalgashiga, Benjamin Graham sidoo kale waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay aabaha dhaq-dhaqaaqa saamiyada. Saamaynta uu ku yeeshay ardaydiisa waxay ahayd in laba ka mid ahi ay u bixiyeen carruurtooda isaga. Warren Buffett ayaa wiilkiisa u magacaabay Howard Graham Buffett halka Irving Kahn uu u magacaabay wiilkiisa Thomas Graham Kahn. Xaqiiqdii, Buffett wuxuu qirey dhowr jeer in Benjamin Graham uu ahaa qofka u yimid inuu saameyn ku yeesho inta badan, aabihiis ka dib.
Waxa kale oo loo yaqaanaa maalgashiga qiimaha, maalgelinta qiimaha waa falsafad maalgashi oo hawlgalkeedu yahay waxay ku saleysan tahay helitaanka dammaanadaha qiimo jaban. Haddii aan ka jarayno qiimaha suuqa qiimaha asalka ah ee keydka la iibsaday, waxay keeneysaa xadad badbaado oo mabda 'ahaan had iyo jeer la siiyo marka aan maal gashanayno qiimaha.
Guud ahaan, maalgashadayaasha qiimaha, sida Benjamin Graham, waxay u maleynayaan in sicirka suuqa uu kordhayo mustaqbalka marka uu ka hooseeyo qiimaha aasaasiga ah ee saamiga. Waa wax sida caadiga ah dhaca marka uu suuqa wax hagaajiyo. Si kastaba ha noqotee, qiimeynta maalgashiga Waxay leedahay laba dhibaato oo waaweyn. Waa inaan si sax ah u qiyaasnaa waxa qiimaha asalka ahi noqon doono oo aan saadaalin karnaa sida ugu macquulsan goorta qiimahaani ka dhex muuqan doono suuqa.
Waxaa jira maalgashadeyaal badan oo caan ku noqday kuna taajiray farsamooyin kala duwan. Mid waliba wuxuu leeyahay waaya-aragnimadiisa, qaababkiisa iyo talooyinkiisa. Erayada Benjamin Graham waxaan rajeynayaa inaan ku caawiyay kuna dhiirigaliyay inaad maalgashi ku sameyso suuqa saamiyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Benjamin Graham Xigasho